Hamafin'ny hazavana amin'ny halavirana 1 m (lx) 160,000LUX (dingana faha-10)
Hamafisin'ny hazavana 83,000lux-160,000 lux / 83,000-160,000 lux
Fahombiazana mamiratra (lm / W) 130 / W
Mari-pana loko (K) 3500-5000K (dingana 4 azo ovaina)
Nanchang Light Technology Exlotatin Co, Ltd dia specilie amin'ny loharano hazavana manokana an'ny fampandrosoana, famokarana ary marketing. Ireo vokatra dia mifandraika amin'ny sehatry ny fitsaboana fitsaboana, sehatra, sarimihetsika ary fahita lavitra, fampianarana, famaranana ny loko, doka, fiaramanidina, mpanao heloka bevava fanadihadiana sy famokarana indostrialy, sns.
Ity ekipa ity dia manana ekipa manana mpiasa tena mahay. Mifantoka amin'ny hevitra fiasan'ny integrit izahay, matihanina. ary ny fanompoana. Ao amin'ny addtin, ny fomba fihevitray dia ny hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, izay heverina ho toy ny ny fototry ny fahavelomana. Izahay dia natokana amin'ny fampandrosoana ny orinasanay sy ny loharano maivana. Mikasika ny vokatra, manolotra fanoloran-tena kalitao feno ho an'ny mpanjifanay manana kalitao izahay fiantohana hahatratra ny foto-kevitr'ireo mpanjifa efa nohajaina sy kalitao aloha. Mandritra izany fotoana izany dia feno fankasitrahana izahay mpanjifa vaovao sy mahazatra izay matoky ny vokatray. Hanatsara kokoa ny vokatra misy izahay ary serivisy, ary misambotra ny fironana farany amin'ny fampandrosoana teknolojia noho io antony io. Hametraka vaovao isika fihodinanan'ny fandrosoana ara-teknika ho an'ny fanavaozana mba hanomezana vokatra sy serivisy technicl tsara kokoa ho an'ireo mpampiasa anay.
Manoloana ny taonjato vaovao, hiatrika opporunities sy fanamby bebe kokoa ny teknolojia Nanchang Light Technology miaraka amin'ny pssin lehibe kokoa, haingam-pandeha kokoa, fofona senstive bebe kokoa ary tsy misy dikany kokoa fitantanana mba hiantohana ny toerana misy anay manan-danja eo amin'ny sehatry ny haitao optika.
Teo aloha: Loharanom-panazavana Endoscope Optical Endoscope LED Cold Light
Manaraka: Fahazavana fitsaboana tsy infareda Fitaovana fitsaboana fitaovana fitsaboana ny hoditra amin'ny hazavana fikolokoloana vatana
tsy misy aloky ny jiro fandidiana
jiro valindrihana fandidiana
fakantsary jiro fandidiana
Amin'ny ankapobeny Reflector miasa efitrano fitsaboana LED Li ...
Jiro tsy misy aloky ny loha tokana
Nentin'ny fandidiana ny jiro fandidiana nify ...
Ny kalitao avo lenta LED Shadowless Led Medica fitsaboana ...
Jiro tsy misy alokaloka LED ho an'ny efitrano fandidiana
Fitsaboana ara-pitsaboana maivana amin'ny finday Shadowless L ...
Jiro mandeha amin'ny fandidiana, Jiro nify, jiro fanadinana ny rindrina, Jiro halogen ho an'ny mpandinika biokimika, Jiro fanadinana ara-pitsaboana, Jiro fanadinana Halogen,